Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horreysay.. | SalaxleyTV
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horreysay..
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa markii ugu horreysay fool ka fool u kulmay. Labada hogaamiye waxay ku kulmeen shir madaxeedka G20 oo maanta ka furmay magaalada dalka Jarmalka ku taalla ee Hamburg.
Waxaa lagu wadaa inay ka wada hadlaaan sidii ay boorka uga jafi lahaayeen xiriirka labadooda dal oo sii xumaaday markii Moscow lagu eedeeyay inay faragelin ku sameysay doorashada Mareykanka.
Wali ma cadda in warbaahinta loo oggolaan doono inay ka qeybgasha shirkaasi iyo in ay shir jaraa’id qaban doonaan labada hogaamiye.
Maxaa laga filan karaa kulanka Trump iyo Putin?
Trump: Putin ayaa ka hoggaan fiican Obama
Putin oo sheegay inuu sugayo maamulka Trump
Labadan masuul ayaa rajaynaya inay meel dhexe isugu yimaadaan, balse loolanka shakhsiyadeed ee u dhaxeeya ayaa ka tarjumaya kala qeybsanaanta ba’an ee ka dhex jirta hoggaanka dalalka ugu dhaqaalaha buuran caalamka.
Hogaamiyayaasha G20 ayaa arrinsan doona aarima muhiim ah sida isbdelka cimilada.